बैंकिंङ/बीमा Archives | Page5of 25 | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - लक्ष्मी बैंकको भिसा डेबिटकार्ड संचालनमा - page 5
काठमाडौँ । लक्ष्मी बैंक लि.ले आफनाग्राहकहरुलाई सुरक्षितएवं नविनतम सुबिधाप्रदानगर्ने उद्देश्य सहित Verified by Visa(VbV) - 3D Secure Service द्वारा सुनिश्चितता प्रदान गरिएकोे,भिसा डेबिटकार्डहरु संचालनमा ल्याएको छ । यो सेवा सुनिश्चितताले ग्राहकलाई अनधिकृत कारोबार हुन बाट जोगाउने भएकाले भिसा डेबिटकार्डहरु संचालनमा ल्याएको बैंकले बताएको छ । एक पटक रजिस्टर्ड गरे पछि Visa Debit Card का प्रयोगकर्ताहरुले संसारको जुनसुकै स्थानबाट क्ष्लतभचलभत को माध्यमबाट सुरक्षित एवं सहज रुपमा इलष्लिभ भ(अयmmभचअभ को कारोवार गर्न सक्नुहुने छ ।	थप पढ्नुहोस्
कमर्सियल बैंकद्धारा १५ वटा विद्यालयहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण
काठमाडौँ । प्राइम कमर्सियल बैंकले चितवन जिल्ला, इच्छाकामना गा.पा. अन्तर्गतका १५ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेको छ । एक समारोहका बिच सेतोपाटी, सुकुुल, कालो मार्कर पेन, डष्टर लगाएतका सामाग्री वितरण गरेको छ । सो तामिन गाँउमा रहेको राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा खानेपानीको लागि १ हजार मीटर पाइप तथा उक्त विद्यालयहरुमा अध्यनरत अति विपन्न परिवारका ७ सय ५० विद्यार्थीहरुलाई झोला, ब्याग, जस्ता शैक्षिक सामाग्रीहरु एक समारोहका बीच वितरण गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
नेपाल राष्ट्र बैंक : आजको विनिमय दर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २८ रुपैयाँ ६८ पैसा र विक्रिदर २८ रुपैयाँ ८४ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ५४ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ ७१ पैसा छ । युएई दिर्हाम एकको खरिददर २९ रुपैयाँ २८ पैसा र विक्रिदर २९ रुपैयाँ ४५ पैसा तोकेको छ । मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ०२ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ १७ रहेको छ । कोरियन वन १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ९८ पैसा र विक्रिदर १० रुपैयाँ ०३ पैसा रहेको छ । कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ५५ रुपैयाँ ९७ पैसा छ भने विक्रिदर ३ सय ५७ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
कृषि विकास बैंकको नतिजा सार्वजनिक
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लि.को लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । को–कसको नाम निस्कियो तलको सूचना हेर्नुहोस् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लि।मा जागिर खुलेको छ । बैंकले विभिन्न पदमा दर्खास्त आह्वान गरेको हो । थप जानकारीका लागि तलको सूचना हेर्नुहोस् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ । लक्ष्मी बैंकको १०२ औँ ए.टि. एम अब पश्चिम पृतना हेडक्वाटर बिजयपुर व्यारेकमा विस्तार गरिएको छ । बैंकले आफ्नो ए.टि.एम सेवा विस्तार गर्ने क्रममा पोखराको पश्चिम पृतना हेडक्वाटर बिजयपुर व्यारेकमा बिहीबार देखि ए.टि.एम सेवा संचालनमा ल्याएकोे छ । यस ए.टि.एमको सेवा व्यारेकका सैनिकहरुका लागी मात्र नभई, सर्वसाधारणहरुका लागी पनि उपलब्ध हुने बताइएको छ । यस ए.टि.एमको उद्घाटन पृतनापति देवेन्द« बहादुर मेधासी र लक्ष्मी बैंकको तर्फबाट मनिष राज कुँवरद्धारा सयुक्त रुपमा गरिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले जेठ १५ गते मंगलबारदेखि लमजङङ्गको क्व्होलासोथार गाँउपालिका-८ साल्मेमा आफ्नो ८६औं र पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका-२ खुर्कोट बगैँचामा ८७ औँ शाखारहित बैकिङ्ग सेवा सुरु गरेको छ । लमजुङ्ग जिल्लाको साल्मेमा खोलिएको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको लागि स्थानीय सर्फु दिन मीयालाई व्यवसायीक प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । त्यसैगरी पर्वत जिल्लाको खुर्कोट बगैँचामा खोलिएको सेवाको लागि स्थानिय छत्रबहादुर क्षेत्रीलाई व्यवसायीक प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
संसदमा नयाँ बजेट पेश : शेयर बजारमा गिरावट
काठमाडौं । सरकारले संसदमा नयाँ बजेट पेश गरेको भोलिपल्ट शेयर बजारमा गिरावट आएको छ । बुधवार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा ४ दशमलव ९४ को गिरावट आएको हो । फाइनान्स, इन्जुरेन्स र लगुवित्त बाहेकका सूचक घटदा नेप्से ओरालो लागेको हो । ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको अपेक्षा सहित अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मंगलवार संसदमा बजेट पेश गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकाले संसदमा पेश गरेको बजेट हावादारी भएको आरोप लगाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । आइएमई पेका सेवाग्राहीहरूले अवदेखि सिद्वार्थ बैंक लिमिटेडको खातामा लिङ्क गरि आइएमई पे वालेटमा सिधैं रकमान्तर गर्न सक्ने भएका छन् । सिद्वार्थ बैंकले सेवाग्राहीहरूलाई आइएमई पे वालेटमा बैंक खाता लिङ्क गर्ने लगायत बैंक खाताबाट वालेट र वालेटबाट बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराएको छ । यसका साथैै सिद्धार्थ बैंकका सेवाग्राहीहरुले ‘आइएमई पे’ मा उपलब्ध रिचार्ज र विभिन्न प्रकारका अनलाइन र अफलाइन भुक्तानी सेवाका अतिरिक्त मनी ट्रान्सफर सम्बन्धी सुविधा पनि प्राप्त गर्न सक्नेभएका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
महालक्ष्मी विकास बैंकको आयोजनामा स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
काठमाडौँ । महालक्ष्मी विकास बैंक लि. ले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न शाखाहरुबाट विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्र्दै आइरहेको छ । सोही कार्यलाई निरन्तरता दिँदै बैंकको साँफेबगर शाखाले साँफेबगर नगरपालिका वडा नं ४ स्थित श्री जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा बयलपाटा अस्पतालको समन्वयमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रम सफल बनाउन बैंकका शाखा प्रबन्धक लक्ष्मण बहादुर साउद र बयलपाटा अस्पतालका डा. विकाश गौचन सहित पाँच सदस्यहरुको उल्लेख्य भूमिका रहेको थियो । शिविरमा साँफेबगर नगरपालिकाका १४७ जना निशुल्क उपचार गराएका थिए ।	थप पढ्नुहोस्